सुनको ट्वाइलेट बनाउँछौ की कामरेडहरु ! — News of The World
सुनको ट्वाइलेट बनाउँछौ की कामरेडहरु !
चन्दा थापा (चन्द्रिका)जेठ ११, २०७५
नयाँ जनवादी क्रान्तिमार्फत समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य घोकाउँदै सर्वहारा वर्गलाई ‘जीते संसार छ हारे हत्कडी’ भनेर उराल्ने उर्फाने नेताहरुको चरीत्र र संस्कृति ठिक उल्टो पाउन थालेपछि जनतामा निरासा बढ्न थालेको छ ।
विधि, नीति र पद्धतिमा जोड दिन भन्दा भद्रगोलमा गोल हान्ने नाउँमा व्यक्तिवादको परकाष्ठा हुर्काएको तथ्य मनसा, बचसा र कर्मणा सबै कोणबाट पृष्टि हुदै जान थालेको छ । सामुहिकता सोच्ने मानसिकता नभै समाजवादको फलाको हाल्नु धिक्कार हो । तर, गरीवी र बाध्यताका बिच नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुले जनता ढाट्ने सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । सामान्तवादी र पुँजीवादी भनिने पंच, कांग्रेस सँग भरोसा नभएका कारण जनताको ठूलो पंक्ति वामपन्थी र कम्युनिष्ट सँग गासिएको सत्य हो तर जनताको बाध्यतालाई भ¥याङ बनाएर व्यक्तिवादी निर्लिप्ततामा चुर्लुम्म भएका नेताहरुको पछिल्लो चाल हेर्दा लोप्राएर देख्लास् भन्ने दिन जनताले कुर्दैछन की भन्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ ।
प्रसंग व्यक्तिगत सुन र धनको सार्वजनिकी सँग मात्र जोडिएको छैन । छोरी, बुहारी, भाइ, भतिजा, आफन्त र लठैतहरुलाई व्यवस्थापनतर्फ लक्षित पार्टी संयन्त्र निर्माण सँग पनि जोडिएको छ । नेतृत्वमा पर्नै पर्ने केही मान्छेलाई देखाएर आफ्नो नियत उदांङगो पार्ने गरी नेताहरुले व्यवहार प्रष्ट्याएको टिप्पणी पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै जेठ ९ गते सार्वजनिक भएको सम्पती विवरणले त सबै नेपालीलाई झस्काएको छ । वर्गविहिन–साम्यवादी समाजका नाउँमा लामो त्याग गरेको बताउने नेताहरुले सुन र धनको विवरण सार्वजनिक गर्दा उनका कार्यकर्ता र समर्थक मात्र होइन, आम नेपालीलाई लज्जाबोध बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली पदमा नरहेको अघिल्लो १ वर्षमा ३१ लाख नगद र १० लाख शेयर थपेको देखाइएको छ । ओलीको बालकोट दरबार र अरु सम्पत्ति आफ्नो ठाउँमा छन तर स्वआर्जनको कथ्यले उनैको निष्ठामाथि थप प्रश्न उठेको छ भने राजकिय पदमा नभएपनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले छोरीहरुलाई घर बनाएको अपुष्ट हल्ला तीब्र नै छ ।
जहाँसम्म सार्वजनिक गरिएको सुन र धनको कुरो छ, इश्वर पोख्रेल र युवराज खतिवडाहरु पहिले देखि नै धनी मान्छे कहलिसकेका व्यक्तिमा मानिन्छन् । तर एमाले महासचिव भैसकेका इश्वरले ‘दाइजो’ को सम्पत्तिलाई नै बढि प्रश्रय दिन रुचाउने गरेका छन् । प्रचण्डलाई लाल गद्दार र व्यक्तिवादी भएको भन्दै पार्टी नै फोडेका राम बहादुर थापाले छिमेकीले दिएको कुकुर र कुकुर्नीको हिसाब राखेर सम्पत्ति विवरण रमाइलो बनाएका छन् । सबैभन्दा धनी मन्त्रीको थर नै महासेठ भएको र उपेन्द्र महतोसँग सिधा सम्बन्ध जोडिएकाले उनका बारेमा खास चर्चा यो विषयमा नभएपनि सिण्डीकेट तोड्ने रुपनारायण भट्टराईलाई गरेको ज्यादतीले उनको नियतमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । यि महासेठको ५२ तोला सुन र कास्कीकै जगत बहादुर सुनारको ५० तोला सुनलाई उछिनेर भर्भराउदा मानिएका युवानेता रविन्द्रले ६० तोला सुन सजिलै देखाएका छन् । सम्पत्तीमा धनी नै ठानिए पनि राष्ट्र र समृद्धिको गफ हाँक्ने यी रविन्द्रलाई यतिधेरै सुन राख्न पर्ने कारण भेटिएको छैन ।
जनयुद्धमा फौजी कमाण्ड गरेको भन्दै प्रभावशाली हक दावी गरेका वर्षमान पुनको १५ तोला सुनले क्रान्तिको बाँकी काम पूरा गर्छ भन्ने लाग्दैन् । अर्का कमाण्डर चक्रपाणी खनालले १० वर्ष अगाडिको १६ धुर जग्गालाई अहिले साढे २८ कठ्ठामा पु¥याएका छन् भने स्वास्थ्यमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा व्यापार गरेर सम्पत्ति जोडेको खुलासा गरेकी छन् । मान्छे कस्तो छ नजिक पुगेपछि थाहा पाइन्छ भन्ने कुरालाई सत्य पार्दै लाल बाबु पण्डितले अस्वभाविक सम्पत्ति जोडेको देखाएर हिजोसम्मको सादगीताको छविलाई उदांगो पारेका छन् भने सर्वहारावादी र भ्रष्टाचारविरोधि बताउने मातृका यादवले विवाह र मुख हेरेको धेरै पुरानो दाइजो अहिले खोलेका छन् । २०६५ मा आफ्नै कर्मचराीलाई ट्वाइलेटमा थुनेर झोकी स्वाभाव देखाएर चर्चामा आएका मातृकाले सादगीताको असलियत उदाङगो पारेका छन् । सत्य बोलेका हुन भने गिरीराजमणिको नियमित अडान र थममायाको यथार्थताका बारेमा सलाम भन्नै पर्छ ।
आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी बताउनेहरुले आफूलाई जनताभन्दा धेरै धनी बनाइसकेको कुरा अब कसैसामु छिपेको छैन । माक्र्सले नीजि पुँजीको अन्त्य गर्दै साम्यवादी संसारको पाठ सिकाएका थिए । लेनिनले सुनका बारेमा भनेका थिए, ‘खिया नलाग्ने हुँदा यो ट्ुवाइलेट बनाउन साह्रै उपयोगी हुन्छ ।’ सायद युवा नेता रबिन्द्र अधिकारीले खिया नलाग्ने ट्वाइलेटका लागि ६० तोला सुन जोडेका त होइनन् ? उपहार, दाइजो, मुख हेर्दा आएको र बक्सिस प्राप्त भएको नाउँमा नेताले सगर्व धनी बनेको भनिरहेका छन् । महिला शसक्तिकरणका लागि श्रीमतीहरुको नाउँमा धन सम्पत्ती जोडेको चर्चा खुव गरिएको छ यतिबेला । जनमानसमा एउटा कौतुहलता छ, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा त यति धेरे घिनाउनेहरु नजिकै पुग्दा कस्ता होलान् ! समाजवादको अत्तर दलेर कहिले सम्म ढाट्लान यिनीहरुले ?